Ataon’i Georgia mafy kokoa ny fanasaziana amin’ny fandikan-dalàna · Global Voices teny Malagasy
Fampiasan'ny polisy hihazonana mpanao fihetsiketsehana ireo lalàna nasiam-panitsiana
Voadika ny 12 Mey 2021 4:25 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny Voice of America.
Ity tantara ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny OC Media. Nivoaka araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty ny endrika naisam-panitsiana kely etoana.
Tamin'ny 29 avrily, nankatoavin‘ny parlemanta anjakazakan'ny “Nofy Zeorziana”, tao anatin'ny andiam-potoana fihainoana novitaina haingana, ny fanitsiana ny Fehezan-dalàna momba ny fandikan-dalàna izay mampiditra fanasaziana mafy kokoa amin'ny fanaovana asan-jiolahimboto (Andininy 166) sy ny tsy fankatoavana ny polisy (Andininy 173).
Nitatitra ny RFERL:
Tao amin'ny fanambaràna iray nivoaka fotoana fohy taorian'ny nandaniana ny fanitsiana, naneho ny “fahadisoam-panantenana lalina” amin'ny fampandanian'ny “Nofinofy Zeorziana” haingana dia haingana ny andian-dalàna ny Masoivohon'i Etazonia ao Georgia, milaza izany ho “tsy voatery ilaina sy tsy manampy.”
Tamin'ny 27 avrily, tao anaty fanamby handresy krizy, nanomboka handray anjara tamin'ny asa parlemantera ny MPs avy amin'ny Strategy Aghmashenebeli, Lelo, ny Antoko Repoblikana, Girchi — Foibe Ara-Politika Vaovao, ary Girchi — More Freedom. Na izany aza, noferan-dry zareo ny asan-dry zareo ho amin'ny lalàm-pamotsoran-keloka izay antenaina hanafahana an'i Nika Melia, mpitarika ny vondrona fanoherana lehibe indrindra United National Movement, izay any am-ponja hatramin'ny 23 febroary amin'ny vesatra mifandraika amin'ny fihetsiketsehana anti-governemanta izay nanenika ny firenena tao anatin'ny volana vitsivitsy izao.